बावुरामको संकेत — अब साझा र विवेकशीलसँग मिल्छौं !
काठमाडौं, ४ जेठ - नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बावुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति नेपाल एक दिन वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा लागेका अरु शक्तिहरुसँग अवश्य पनि मिल्ने बताएका छन् । वैकल्पिक शक्तिहरु कसरी चुके भनेर लेख लेखेका विनोद ढकाललाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले एक दिन आफूहरु अवश्य पनि मिल्ने बताए ।
उनले साझा पार्टी र विवकेशील पार्टीसँग मिल्ने बताएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जाल टुइटमा भनेका छन् — धन्यवाद विनोद ढकालजी, नयाँ शक्तिरवैकल्पिक राजनीतिका पक्षधरहरूलाई घच्घच्याउनु भएकोमा१त्यो दिन अवश्य आउँछ !
धन्यवाद विनोद ढकालजी, नयाँ शक्ति/वैकल्पिक राजनीतिका पक्षधरहरूलाई घच्घच्याउनु भएकोमा!त्यो दिन अवश्य आउँछ! https://t.co/HkyvMwhsj9
— Baburam Bhattarai (@brb1954) May 18, 2017
कुन जिल्लामा कति मतदाता ? हेर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचि
बाजी हारेपछि देउवाले दिए चिरीबाबुलाई हजारको नोट !